Me-Commerce iyo Mustaqbalka Tafaariiqda | Martech Zone
Tafaariiqdu si dhakhso leh ayey isu beddeleysaa - khadka tooska ah iyo khadka tooska ah. Dhaqan ahaan, hay'adaha tafaariiqda ayaa had iyo jeer lahaa faa'iidooyin hooseeya iyo mug badan si ay u soo saaraan natiijooyinka ganacsi ee ay ugu baahnaayeen inay ku noolaadaan. Waxaan ku aragnaa isbeddelo degdeg ah tafaariiqda maalmahan halkaasoo tiknoolajiyada ay xawaareynayso koritaanka iyo kordhinta waxtarka. Xarumaha tafaariiqda ee aan ka faa'iideysan way dhimanayaan… laakiin tafaariiqleyda ka faa'iideysanaya tikniyoolajiyadda ayaa leh suuqa.
Isbeddelada tirakoobka dadweynaha, kacaanka teknolojiyada, iyo baahida macaamiisha ee adeeg gaar ah ayaa badalaya khariidada loo maro safarka go'aanka macaamiisha.
McKinsey oo ku saabsan Suuqgeynta waxay soo bandhigaan waxay aaminsan yihiin inay yihiin cusub Afar P ee Suuqgeynta:
Faafid - dadku way ka adeegtaan meel kasta oo ay joogaan - hadday sariirta la socoto kiniin ama intay dhexda ku jiraan qolkaaga bandhig.
Kaqeybgal - dadku waxay abuurayaan oo ay wadaagayaan qiimeynta iyo dib u eegista khadka tooska ah ee shirkadaha, wax soo saarka iyo adeegyada.
Shakhsiga - Dufcaddii iyo qarxintii suuqgeyntii soo jireenka ah ayaan sii shaqeyneyn. Isku xirnaanta shucuurta iyada oo loo marayo sheekooyinka la midka ah ayaa keenaya beddelaad.
Diiwaan Gelinta - Codsiyada moobiilka, cilmi-baarista khadka tooska ah iyo aaladaha bulshada ayaa ka caawinaya macaamiisha inay la wareegaan gacan ku haynta adeeggooda nidaamkooda.
Tags: GanacsigaecommerceMcKinseyMcKinsey & Shirkaddame-ganacsidukaanka internetkakaqeybgalshakhsifirfircoondaawo qorintafaariiqdafarsamada tafaariiqdashopping
Tiknoolajiyadda Wearable ee aadka loo Raadinayo